ပုရိသအပေါင်း ကြွေစင်းသွားမယ့် မိမိုက်လွန်းနေတဲ့ ဖက်ရှင်လေး နဲ့. ဆွဲဆောင် မှု ရှိရှိ လှနေတဲ့ ခင်အင်ကြင်းကျော် – Shwe Yoe
ပုရိသအပေါင်း ကြွေစင်းသွားမယ့် မိမိုက်လွန်းနေတဲ့ ဖက်ရှင်လေး နဲ့. ဆွဲဆောင် မှု ရှိရှိ လှနေတဲ့ ခင်အင်ကြင်းကျော်
မြင်သူ တိုင်းငေး လော က် တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်ကောက် ကြောင်း အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထား တဲ့ မော်ဒယ်လ်ခင်အ င်ကြင်းကျော် ကို သိကြမယ် ထင်ပါတ ယ်နော်။ မော်ဒယ်လေ် လာက ကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ်အများအပြားရဲ့အားပေးဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်းရ ရှိလာတဲ့ မော်ဒ ယ်ဖြစ်ပါတယ် ယောကျာ်းလေး ပရိသတေ် တွရဲ့ ဝန်းရံအားပေး မှုရရှိထားတဲ့ သူမ ကတော့ social media လောကမှာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တ ည်နေသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ ဆက်ဆီ ကျပြီး အမိုက်စား ပုံတွေနဲ့ ညို့ အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင် သူလေးဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိ ဖေ့ဘွတ်စာ မျက်နှာမှာ ရေပန်းစားလူကြိုက်များကာ ပုရိသတွေ ဝန်းရံနေကြတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်တွေ ကို လူမှုကွန် ယက်ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ ရှိ တာတွေ့ရပါတယ်။
ပုံလေးတွေတိုင်း မှာ မော်ဒယ်ခင်အင်ကြင်းကျော် တစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ လန်းလွန်းနေတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ခပ်ချေချ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးကို့ တင်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်၊၊မ်ာဒယ်လ်ခင်အင်ကြင်းကျော် ရဲ့ အလှပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိတ်သတ်တွေ အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်တယ်နော်
Source : Khin Injinn Kyaw
မွငျသူ တိုငျးငေး လော ကျ တဲ့ အမိုကျစား ခန်ဓာကိုယျကောကျ ကွောငျး အလှကို ပိုငျဆိုငျထား တဲ့ မျောဒယျလျခငျအ ငျကွငျးကြျော ကို သိကွမယျ ထငျပါတ ယျနျော။ မျောဒယျလျေ လာက ကိုဝငျရောကျတာ မကွာသေးပငျမဲ့ ပရိသတျအမြားအပွားရဲ့အားပေးဝနျးရံမှုကို တဖွညျးဖွညျးရ ရှိလာတဲ့ မျောဒ ယျဖွဈပါတယျ ယောကျြားလေး ပရိသတျေ တှရဲ့ ဝနျးရံအားပေး မှုရရှိထားတဲ့ သူမ ကတော့ social media လောကမှာ နာမညျတဈလုံးနဲ့ ရပျတ ညျနသေူ တဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။
သူမရဲ့ ဆကျဆီ ကပြွီး အမိုကျစား ပုံတှနေဲ့ ညို့ အားပွငျးပွငျး ဆှဲဆောငျနိုငျ သူလေးဖွဈတာကွောငျ့ လကျရှိ ဖဘှေ့တျစာ မကျြနှာမှာ ရပေနျးစားလူကွိုကျမြားကာ ပုရိသတှေ ဝနျးရံနကွေတာ လညျးဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ အမိုကျစားပုံရိပျတှေ ကို လူမှုကှနျ ယကျဖဘှေ့တျပျေါတှငျ အမြားဆုံး တငျလေ့ ရှိ တာတှရေ့ပါတယျ။
ပုံလေးတှတေိုငျး မှာ မျောဒယျခငျအငျကွငျးကြျော တဈယောကျ ဆှဲဆောငျမှု ရှိရှိနဲ့ လနျးလှနျးနတော လညျးဖွဈပါတယျ။ သူမကတော့ ခပျခခြေ ရိုကျထားတဲ့ ပုံလေးကို့ တငျပေးလာတာပဲဖွဈပါတယျ၊၊မျာဒယျလျခငျအငျကွငျးကြျော ရဲ့ အလှပုံရိပျလေးတှကေို ပရိတျသတျတှေ အတှကျ ပွနျလညျမြှဝပေေး လိုကျတယျနျော
bra မပါတဲ့ အနီရောင်ဖက်ရှင်နဲ့ ရင်ဖိုစေသွားမယ့် မမရှင်ယွန်းမြတ်ရဲ့ အမိုက်စားပုံများ
ဘရာမပါတဲ့ ဗလာကျင်းပုံလေးတွေ နဲ့ ပရိသတ်တွေ ကို ဖမ်းစားလိုက်တဲ့ စစ်ပိုးအိမ်